Machadka McKnight wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo in Tenzin Dolkar uu u adeegi doono sarkaal barnaamij Cilmi-badeedka & Tamarta Midwest (MC&E) barnaamijka laga bilaabo Maarso 10. Dolkar wuxuu horseeday qorshayaal cimilo muhiim ah oo laga hirgeliyey gobolka Minnesota wuxuuna keenay khibrad siyaasadeed oo dadweyne oo xagga gaadiidka, dhismooyinka, iyo beeraha ah. Waxay kubiirtaa McKnight daqiiqad muhiim ah markaan balaarinayno barnaamijka MC&E qaado tallaabo geesinimo leh dhibaatada cimilada adoo si ba'an u goynaya kaarboonka wasakheynta bartamaha Galbeed 2030.
"Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno Dolkar kooxdeena, anagoo balaarinayna awoodeena si aan u gaarno himilooyinka hamiga leh ee McKnight," ayay tiri Sarah Christiansen, oo ah agaasimaha barnaamijka MC&E. “Dolkar wuxuu xirfad sare u leeyahay dhaqaajinta fikradaha xaddidaadda tallaabada ee laga qaadayo dhammaan gaadiidka, dhismayaasha, iyo beeraha waana mid si qoto dheer u wadashaqeyn leh, iskuna kaashanaya daneeyayaasha kala duwan. Waxay keentaa waayo-aragnimo lagu qiimeeyo noolaanshaha iyo dhiirigelinta dhiirrigelinta iskaashiga bulshada ee horumarinta siyaasadda iyo maamulka ee baaxadda iyo baaxadda looga baahan yahay xilligan xasaasiga ah. ”
Marka lagu daro Christiansen, kooxda MC&E waxaa ka mid ah sarkaalka barnaamijka Brendon Slotterback, maamulaha kooxda barnaamijka Kelsey Johnson, iyo barnaamijka iyo deeqaha la shaqeeya Sam Marquardt. Doorkeeda, Dolkar waxay kormeeri doontaa oo ay horumarin doontaa deeqaha deeqaha ee taageera dadaallada lagu dhisayo awoodda iyada oo loo marayo iskaashi, iyadoo la waafajinayo cimilada iyo ujeedooyinka sinnaanta McKnight.
Xalka Cimilada iyo Saamaynta Bulshada ee Qaybta Dadweynaha
Dolkar waxay ku biiraysaa McKnight oo ka socda Golaha Difaaca Kheyraadka Dabiiciga ah iskaashiga ay la leedahay Bloomberg Philanthropies Tartanka Cimilada ee Magaalooyinka Mareykanka, halkaas oo ay u noqoto lataliye cimilada Magaalada Minneapolis. Doorkan, waxay lashaqeysaa xafiiska magaalada ee waaritaanka iyo waaxda howlaha guud si loo dardar galiyo gaadiidka iyo dadaallada dhismaha ee looga golleeyahay yareynta saameynta sare ee qiiqa gaaska lagu sii daayo. Waxqabadyadan waxaa ka mid ah naqshadda magaalada ee lagu gaarayo 100 boqolkiiba koronto la cusbooneysiin karo sannadka 2030 iyo, iyada oo loo marayo xeerar dhisme oo ka wanaagsan kuwa gobolka oo dhan, tamar-saab-eber ah oo ah halbeegga dhammaan dhismooyinka ganacsi ee cusub sanadka 2036.
Dhismaha isbahaysiga iyo u doodaha bulshada, Dolkar waxay ku aragtaa shaqadeeda iyada oo loo marayo muraayadaha cadaaladda cimilada. Shaqada ay u hayso magaalada, waxay abuurtay qaab lagu falanqeeyo sinnaanta jinsiyadaha ee naqshadaynta barnaamijyada cimilada. Intaa waxaa sii dheer, waxay bilowday oo taageertay isbahaysiga ururada cadaalada deegaanka iyo Madow, Asal ahaan, iyo hogaamiyeyaasha bulshada midab-kala-baxa ah si ay uga qayb qaataan arrimaha tamarta, sida Qorshaha Kheyraadka Isku-dhafan ee Sare ee Midcelwest ee 15-ka sano ee Xcel Energy.
"Dolkar wuxuu xirfad sare u leeyahay dhaqaajinta fikradaha goynta dekedda si wax looga qabto dhammaan gaadiidka, dhismooyinka, iyo beeraha waana mid si qoto dheer u wada shaqeynaya, iskuna kaashanaya daneeyayaasha kala duwan." —SARAX KRISTIANSEN, CIMILADA DHEXE & AGAASIMAHA BARNAAMIJKA Tamarta
Intii u dhaxeysay 2016 ilaa 2018, Dolkar wuxuu lataliye sare ka ahaa siyaasada Mark Mark Dayton dhanka gaadiidka iyo beeraha. Waxay qortay amarka fulinta ee Gudoomiye Dayton oo ku saabsan gawaarida iswada isla markaana wuxuu iskaashi la sameeyay kumanaan beeraley ah oo reer Minnesota ah si loo horumariyo Xeerka Ilaalinta Biyaha Dhulka ee gobolka. Sannadkii 2017, Guddoomiyaha Gobolka Dayton wuxuu u magacaabay Dolkar inuu u adeego Agaasimaha Gobolka Tareenka ee Gobolka Minnesota, isagoo kormeeraya mashaariicda tareenka dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay iyo horumarinta nabadgelyada tareenada iyo siyaasadaha dhaqaalaha xamuulka.
Dolkar waxay ku dhalatay Odisha Phuntsokling, oo ah degsiimada qaxootiga Tibet ee bariga Hindiya, halkaas oo ay ku kortay beerashada iyo barashada biyo yaraanta iyo xalka deegaanka ee bulshada ku saleysan. Waxay haysataa shahaadada mastarka ee shaqada bulshada ee Jaamacadda Minnesota iyo shahaadada bachelorka ee daraasaadka caalamiga ah iyada oo yar oo ku saabsan shaqada bulshada oo ka socota Jaamacadda St. Thomas.